Ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa China na ndị na -ebubata ya EVERGREEN
Nhọrọ nchịkọta nkwakọ ngwaahịa anyị gụnyere nhọrọ nke ihe iji mepụta akpa gị site na nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe na/ma ọ bụ gburugburu (ụlọ). Ọtụtụ n'ime usoro 5000 anyị nwere ike ịhazi ma na -enyekwa ihe mgbochi ịchọrọ iji kpuchido ngwaahịa gị ma nye nkwụsi ike. Anyị nwere usoro nkwakọ ngwaahịa compostable akwadoro nke ga -akụkọta n'okpuru ọnọdụ ihe mere, nke ejiri ihe ndị emere emegharị eme. Ngwa ndị a bụ ọdịnihu teknụzụ mgbochi. Anyị na ndị na-eme ihe nkiri na-emekọrịta ihe mgbe niile iji nye ndị ahịa anyị ihe ọhụrụ kachasị ọhụrụ na mgbochi mgbochi, nke ejiri plastik mee dị ka okpete, ọka na casava.
Ngwaahịa gburugburu ebe obibi na Green
Abụọ Recyclable na ambient compostable dị.
Enwekwu ihe mgbochi na nhọrọ ọkpụrụkpụ.
Ihe ngwugwu Compostable
Iji nye ndị ahịa onyinye kachasị elu na ngwaahịa na -agbagọ, anyị na -arụkọ ọrụ na ndị na -ebubata ihe nkiri / laminators nwere ọtụtụ ngwakọ na ihe na -emebi emebi. Nhọrọ nchịkọta ngwongwo na -agbanwe agbanwe ma na -agbanwekwa mgbe niile, anyị na -eme atụmatụ itinyekwu nhọrọ ihe onwunwe n'ọdịnihu.
BioCareKraft na BioClear bụ ihe nkwakọ ngwaahịa compostable dị mma maka ọtụtụ nri nri akọrọ na ọkara. Ihe abụọ ahụ na -enye nchebe mgbochi ma enwere ike ịhazi ya. Anyị nwere ọtụtụ nhọrọ ọkpụrụkpụ iji bulie arịrịọ na mgbochi.
Isi ọnụahịa pụrụ iche na nha nha
Kwekọrọ na ọtụtụ nhazi akpa
Asambodo Nkwakọ ngwaahịa
Enwere ọtụtụ asambodo, ma ndị otu ụlọ ọrụ yana ndị otu gọọmentị. Na mkpokọta, enwere ụdị nkwakọ ngwaahịa abụọ nke mbụ nwere ike bụrụ ihe eji emepụta ihe, nke enwere ike ịhazi ya na kọmpụta ụlọ ọrụ, nke abụọ bụ compostable ụlọ (ambient) nke nwere ike compost n'okpuru gburugburu ebe obibi ụlọ. Usoro nke ịkọ mmiri chọrọ ngwakọta nke okpomọkụ, ndụ microbial, mmiri, oxygen, na ihe ndị ọzọ.
Emebela ọtụtụ atụmatụ nrịba ama iji mata njirimara compostable na mkpofu nke ihe nkwakọ ngwaahịa compostable. DIN Certco na Vincotte bụ ọgbakọ abụọ na -akwalite ụkpụrụ akara ndị a.
Eco-Enyi na Enyi Belata Nchekwa & Ahụike
Akwụkwọ nri akpa akpa akụkụ atọ
Pouches kwụ ọtọ
Mpempe akwụkwọ Gusset Compostable
Akpa akpa dị larịị Compostable
Ihe nkiri nkwakọ ngwaahịa Compostable
Nke gara aga: Akpa akpaaka/akpa mkpọchi Zip/jiri obere mkpọchi kwụ ọtọ
Osote: Ụlọ ahịa na-ebubata ngwongwo ndị a na-ejigharị emegharị emegharị